Oge igbanwe azụmahịa gị (Miss gaghị agbaghara m) | Martech Zone
Oge igbanye maka azụmahịa gị (Miss gaghị agbaghara m)
Tọzdee, Machị 12, 2015 Tọzdee, Machị 12, 2015 Douglas Karr
Ọ malitere site na Tweet…
Douglas Karr Otutu https://t.co/oPodYLEZnQ @onyedikachi_ #iheanacho http://t.co/gVR64opiLM
- Onyinyechi ugochukwu (@nkwuatz) March 10, 2015
Ikwu na afụfuru m bụ nkwupụta okwu. Apụghị m ịkwụsị ịchị ọchị otú a ọma e si dee rap an ma onye m na-ahụtụbeghị mere m nyocha. Onye ahụ bụ Dan Stokes.
Dan malitere Rappitt.com na ịbụ a ego strapped mmalite, na-achọ pụrụ iche ụzọ iji nweta okwu (nweta ya?) Banyere azụmahịa ha. Ha chọtara Martech Zone na mgbe na-achọ m elu m ga-abụ oké lekwasịrị.
M hụrụ ya n'anya… ozodimgba ahia na influencer ahịa niile zụrụ elu na tweet. (Emere m ya ọzọ). Nke a bụ akụkọ Dan:
Enwetara m agụụ maka egwu, na ịkụ egwu, afọ 15 gara aga. Ka agụụ m na-enwe maka egwu na-eto, achọpụtara m na achọrọ m ịme nhọrọ a career na ntụgharị. Na Rappitt.com, anyị nwere mmetụta n’ezie na anyị ekepụtara ma mezuo ọrụ anyị, nsonaazụ ya bụ ngwaahịa na -emepụta obi ụtọ omenala na mmata maka oge niile. Emeela m 100 nke vidiyo ndị a maka ndị enyi, ndị ọrụ ibe, na ndị ọchụnta ego kemgbe ọtụtụ afọ.
Ọnụ ego Dan karịrị akarị maka ụdị okike a na vidiyo ikpeazụ bụ ego agbakwunyere. Know ma na ịchọrọ egwu rap maka mmekọrịta mmadụ na ibe gị ma ọ bụ azụmaahịa gị?
Olileanya, Dan na-enweta iwu site n'aka gị ndị otu maka nnukwu atụmatụ ya. Ka anyị gosipụta na ụdị ahịa influencer a na-arụ ọrụ!
Tags: na-akpa ọchịRAPọrụ rapnnweta
Mgbanwe na Ntanetị withzụ ahịa na Ndị na-ere ahịa